Dị ka ọtụtụ ndị, ị nwere ike amasị iji VLC dị ka gị mgbasa ozi ọkpụkpọ, n'ihi na free ọkpụkpọ nwere ike igwu dị iche iche audio & video formats, nakwa dị ka DVD wdg Ma dị ka a VLC hụrụ n'anya, ị pụrụ eleghị anya na-echekwa nza nke fim na VLC n'ọbá akwụkwọ. Ọfọn, chọrọ iji tọghata ndị a vidiyo ma ọ bụ ihe nkiri na VLC ka MP4 usoro maka playback na gị smart mobile ekwentị ma ọ bụ ọtụtụ ndị ọzọ obere ngwaọrụ dị ka PSP wdg? Ọ bụrụ otú ahụ, ị ​​pụrụ ịmụta otú iji tọghata VLC videos ka MP4 videos ọsọ ọsọ na mfe ke ibuotikọ emi.
Nkebi nke 1: Olee otú iji tọghata VLC faịlụ ka MP4 na VLC
Part 2: An mfe ụzọ iji tọghata VLC faịlụ ka MP4
Nzọụkwụ 1: Import Video ka VLC
Nke mbụ niile, anyị kwesịrị emeghe anyị VLC Media Player, na mgbe ọ na oghere, anyị kwesịrị pịa nke n'elu igodo mmanya, na pịa na "Media" mgbe, nke ga-emeghe a obere Dropbox.
Na nke a Dropbox anyị kwesịrị pịa na "Open Multiple Files ..." taabụ, (ma ọ bụ na-eji a hotkey Ctrl + Mgbanwe + O)-echere ruo mgbe menu ga-egosi na anyị na ihuenyo.
Nzọụkwụ 2: Gaa tọghata menu
Na menu, nke pụtara, pịa "Tinye" button, ma họrọ faịlụ gị mkpa iji tọghata. Mgbe nke a ị kwesịrị ị na pịa na akụ, nke na nsogbu nso "Play" button. Na ịpị a akụ ga-emeghe a Dropbox, nke anyị kwesịrị ịhọrọ a njikọ, na-akpọ "tọghata", ma ọ bụ nanị iji a hotkeys Alt + O.
Nzọụkwụ 3: Họrọ ntọala dị ka ị na-amasị
Na menu, nke pụtara, ị ga-ahụ ihe ndị dị otú:
The ụzọ na isi iyi nke video, ụdị nke faịlụ a, na ọnọdụ, nke dị anyị mkpa guzobere.
Nke mbụ niile, anyị kwesịrị jikwaa anyị profaịlụ, na ahọrọ onye nke dabara anyị ihe kasị mma. Na Dropbox onye pụrụ ịhụ nnọọ ọtụtụ profaịlụ - n'ihi na iDevices, TV, Androids, wdg Ma, anyị kwesịrị họrọ naanị otu - ọ na-akpọ "Audio - MP3 (MP4)". Ọ na-gosiri na screenshot:
Dị ka ị chọpụtara na e nwere ụfọdụ buttons aka nri nke ndị Dropbox, e anyị na họọrọ ụdị nke profaịlụ. Ndị a bọtịnụ na-eji:
Press hazi ụdị nke video ma ọ bụ ọdịyo codecs, nke gị mkpa kpọmkwem maka video ma ọ bụ onye audio ị na-agbalị iji tọghata. Site n'ụzọ, e nwere ụfọdụ ọzọ oké ọrụ na ikike n'ihi na ị na-amụ.
Hichapụ profaịlụ nke a họọrọ na Dropbox.
Onye a na-eji maka eke ọhụrụ ụdị profaịlụ ijikwa niile ọdịyo na video codecs maka faịlụ gị mkpa iji tọghata.
Nzọụkwụ 4: Malite akakabarede usoro
Mkpa ka ị na-ahọrọ ebe faịlụ, ebe niile ozi ga-nwere. Na anyị ikpe, anyị nwere ike iji "Chọgharịa" button, na-abịa na Desktọpụ, dee a aha faịlụ, ka ọ bụrụ "container.mp4", a ma mgbe, web kwesịrị pịa na "Malite" button, na usoro nke akakabarede ga-amalite.
Ihe e mere atụmatụ oge nke converting na-adabere na ike nke PC gị, na ụdị nke codec ị na-eji iji tọghata.
Ịtụle VLC video faịlụ ndị dị iche iche formats, gị mkpa a dị ike video Ntụgharị maka enyemaka gị. Wondershare Video Ntụgharị (Video Ntụgharị maka Mac) bụ ike ịkwado a sara mbara nso nke ọdịyo & video formats, ọbụna DVD faịlụ. Na a flash, akwa VLC ka MP4 Ntụgharị nwere ike ime ka ị na-enwe niile nke gị VLC videos na gị MP4 mgbasa ozi ọkpụkpọ na nke kacha mma ikiri mmetụta. Na-arụ ọrụ bụ kwa m achọ ịma mfe, na usoro bụ nnọọ ngwa ngwa. Dị nnọọ na-eso nduzi n'okpuru.
Nzọụkwụ 1. Import VLC faịlụ ka VLC ka MP4 video Ntụgharị maka akakabarede
Ịnyagharịa na nchekwa na e dere mpaghara gị VLC video faịlụ. Wee họrọ faịlụ na ị chọrọ, na-esote, nanị ịdọrọ ha ka ha a ngwa si ​​ebi ndụ. Ma ọ bụ i nwere ike pịa bọtịnụ na a window na-agagharị na gị na kọmputa na mbubata VLC faịlụ a usoro maka video akakabarede.
Cheta na: Mgbe ala nke a window, e nwere faịlụ ụzọ na Open nchekwa nhọrọ. Mmepụta faịlụ ga-echekwara na nchekwa, na nwere ike ngwa ngwa hụrụ bụrụ na ị pịa Open nchekwa.
Nzọụkwụ 2. Họrọ MP4 dị ka mmepụta format
Ị nwere ụzọ abụọ iji mepee ya mmepụta format ndepụta. Otu bụ see format image na akara ngosi na mmepụta Format ebi ndụ. Ahụ ndị ọzọ bụ na-pịa ndọpụta format ndepụta n'otu ebe. Mgbe ị na-eme ya, dị nnọọ see "Format" taabụ, wee họrọ "MP4" si "Video" udi.
Nzọụkwụ 3. tọghata VLC ka MP4
The ikpeazụ nzọụkwụ bụ pịa "tọghata" nhọrọ na ala-nri akuku nke a usoro 's isi interface. Ugbu a, a na ngwa ga-amalite iji tọghata VLC video faịlụ ka MP4 faịlụ. Na video akakabarede ga-agwụ agwụ na a nkeji. Mgbe ọ mere, dị nnọọ gaa mmepụta nchekwa ịchọta converted MP4 faịlụ maka ojiji.
Cheta na: Ọ bụrụ na ị chọrọ igwu mmepụta faịlụ na ụfọdụ ngwaọrụ, otu mmezi nzọụkwụ bụ nyefee faịlụ ka ngwaọrụ site na USB.
Top 5 Atụmatụ gị mkpa maara banyere mfe ihuenyo edekọ
Olee otú iji tọghata Njikọ MP3
VideoPad Editor maka Mac: Professinal Mac Video Editor maka Beginners
Olee otú Mee a iMovie Photo ngosi mmịfe na Music
> Resource> Video> Olee otú iji tọghata VLC faịlụ ka MP4 Files